Layaab - Daawo Labo Nin Walaalo ah Oo Wada Guursaday Hal Xaas - iftineducation.com
2 Men Married 1 Girl
iftineducation.com – Dunidan aynu kunoolnahay waxa aad ku arkeysaa wax kaa yaabiya Ama kaa naxiya sidoo kale dhacdooyinka ka dhaca caalamka waa isdaba joog.
Amore iyo Kunden oo ah Labo Nin oo Walaalo ah waxa ay udhasheen Dalka Hindia iyagoo labadooda ay ka dhaexeeyso Hal Gabar oo ay wada qabaan Ama Xaas U ah.
Sida ay Qortay Todabadkan Jariirada ka soo baxdo dalkaasi anagoo Ka Soo xiganay CNNka ayaa lagu sheegay In Labadaan Nin Ee Walaalaha ay ay wax walba wada qeebsadaan sida shaqada, guriga iyo in xitaa iney wada qeebsanayan Hal Xaas.
Gabadha ay ay wada qabaan Labdasi Nin ee Walaalaha ah yaa lasheegay In ay ku qanacsantahy lanoolaashaha Labada Nin iyadoo intaa ku dartay in ay si aad ah ugu farxsantahy saaxibda ay nolasha la wadaageeyso.
Labadan Nin ayaa mararka Qaar isku dhaca isku dhacaas ayaa dhasha xiliyada ay labaashaalayaan xaaskooda.
Arintaan ayaan ku cusbeen caalamka iyadoo wadmo badan oo kamida kuwa qaarada Eeshiya ah ay ka dhacaan Arimo nuucan ookala ah.
Wadmada aan diimaha heysan ee cawaanta waxa aad ku arkeysaa dhaqmo aad ufool xun oo ku cajab galinaya.
Halkaan Ka Daawo Labo Nin oo wada Guursaday Hal xaas